नेपाललाई प्रजातन्त्र फाप्दैन
केही वर्ष यता काठमाडौंका गफअड्डातिर अनि पुराना संस्थापनका मानिसहरुबीच अक्सर एक खाले चर्चा सुनिने गरिएको छ–‘नेपाललाई प्रजातन्त्र फाप्दैन ।’ विस्तृतमा...
किन खरेल र खनाल नेपाल प्रहरीमा सँगै अटाउन सकेनन् ?
तपाईंले खोजेको समाजवाद समृद्धिबिनाको हो ?
विश्व विख्यात अंग्रेजी नाटककार सेक्सपियरले १६०३ तिर एउटा नाटक ‘ओथेलो’ लेखेका छन् । उक्त नाटक अहिलेको इटालीको भेनिस सहरको सेरोफेरोमा लेखिएको नाटक हो । उक्त नाटकमा नाटकको मुख्य पात्र ‘ओथेलो’ भेनिस सहरको सैनिक जनरल प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुन्छ । उसका २ जना सैनिक साथीहरु हुन्छन् लागो र क्यासियो ।
‘अन्ध समाजवादी चिन्तक’ विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले एउटा टेलिभिजन ‘टक शो’मा बहुत आत्मविश्वासका साथ प्रश्न गरे । ‘के यो देशमा रेल ल्याएर, डोजर गुडाएर, सपिङ कम्प्लेक्स ठड्याएर समृद्धि हुन्छ ?’ उनले जबरजस्त गरेको तर्कको भाव थियो, ‘त्यो त पँुजिवादीहरुको पक्षमा राज्यले गर्ने ‘कुकर्म’ हो ।
मागेर बजेट बन्ने देशमा… कठै अब माग्न पनि नपाइने !!
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र परिसरलाई मगन्तेरहित घोषणा गरेको छ । मागेर जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका मानिसलाई पुनर्स्थापना गृहमा राख्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनका वैकल्पिक उपाय सिकाउने घोषणासहित गरिएको मगन्तेरहित पशुपति क्षेत्रको कारण माग्ने पेशामा रहेका मानिसहरूको पेशा धरापमा परेको छ ।
परिचित कतिपय मानिस नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का र मेरोबीचको सम्बन्धलाई ‘विशेष’ मान्दथे–मान्दछन् । कतिसम्म भने मेरो पत्रकारिता जीवनसमेत खुमबहादुरको सहयोगमा चलिरहेको छ भनी ठान्नेहरू पनि थिए । वास्तवमा उहाँसँग मेरो सम्बन्ध पूर्ण रूपले राजनीतिक थियो,
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका (०६५) बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो विकल्प बन्न सक्ने हैसियतमा कसैलाई देख्दैनथे र आफूलाई बाहिर राखेर यो मुलुकमा कसैले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने कल्पनासम्म उनी गर्दैनथे । सेनापतिसँग निहुँ खोज्दा प्रचण्ड आफैँ पद त्याग गरेर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको घटना नेपालको इतिहासमा अङ्कित भइसकेको छ ।
तरलता, अभाव र आर्थिक उन्नती नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती
काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेप संकलनको लागि अनेक उपाय अपनाउन थालेका छन् । आकर्षक ब्याजदर दिने भन्दै बैंकहरु सहकारी संस्थाको कार्यलय पुग्ने, निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक अफरको नाममा रिचार्जकार्ड देखि आकर्षक ब्याजदर दिन पनि बैंकहरु पछि परेका छैनन् ।
मालिकाको महिनावारी, पापी परिवार र माइजूको माया
मालिका स्कूलबाट घर पुग्दा उनकी माइजुलाई घरमा देखेर खुब खुसी भइन । मालिकाको आफन्तमा सबैभन्दा मनपर्ने नै माइजु हुन ।
उद्घाटन र खाेक्राे भाषणमा बितिरहेकाे माननीयहरूकाे दिनचर्या
निर्वाचन सकिएको करिव १ वर्षको अन्तरालमा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कार्ययोजना र त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेन ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूला महत्व विश्वास र मान्छेको मनोविज्ञानले राख्छ
सेयर बजारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याजदरले पारेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिदेशी पुँजी ल्याएर तरलता समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । अहिले शोधानान्तर साढे ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । देशबाट बाहिरिने रकम बढेपछि जहिलेपनि यहाँ बैंकमा पैसाको हाहाकार हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने अर्थमन्त्री घोषणा छ ।